रामकुमार डिसी आइतबार, भदौ १४, २०७७, १५:१७
काठमाडौं- रोक्ने अनेकन प्रयासका बावजुद पनि उनका गहभरि आँसु टलपलाइरहे। हर्षका नभई ती उनका दुःख, वेदनाका आँसु थिए। आफ्नै दु:ख-सुखसँग रमाउने कोसिस गरिरहेका श्रीमान्‌लाई घरैबाट बेपत्ता पारिदिएपछि चितवन माडीकी मोहनकला आचार्य १८ वर्षदेखि बेचैनपूर्ण जिन्दगी बाँचिरहेकी छन्। उ:बेलाको त्यो कहालीलाग्दो क्षण सम्झेर ल्याउँदा उनका आँखामा आँसु छचल्किन्छन्।
आफ्ना प्रिय श्रीमान्‌लाई न उनले बिर्सन सकेकी छन्, न पाउन नै। देशमा चलिरहको सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षतिर पुग्नै लाग्दा श्रीमान्‌ कृष्णप्रसाद आचार्यलाई घरबाटै बेपत्ता पारियो। उनको बेपत्ता पार्नेबारे अहिलेसम्म मोहनकलाले केही भेउ पाउन सकेकी छैनन्।
बेपत्ता श्रीमान् पाउने आसैआसमा चितवनदेखि काठमाडौंसम्म पटपटक बेचैनपूर्ण यात्रा नापिसकेकी छन्, मोहनकलाले। उनको झैं दुःखको भारी बोकेर चितवनबाटै अरु दुई द्वद्वपीडित महिला पनि काठमाडौंमा आएका छन्। उस्तै वेदना र उस्तै मागका लागि न्याय माग्न पद्मापुरकी लीलादेवी भण्डारी (लोप्चन) र खैरेनीकी सीतादेवी अधिकारी काठमाडौंमा छन्।
संघीय सरकार बसेको काठमाडौं खाल्डोले न्याय देला या नदेला? उनीहरुसँग बाँकी भनेको आशा मात्रै छ। तर भरोसा छैन।
फर्किएनन्, सेनाले लगेका श्यामबहादुर
रातको करिब १२ बजे। चूक घोप्ट्याएको रातमा लीलादेवीका श्रीमान् श्यामबहादुर लोप्चनलाई खोज्दै दुई व्यक्ति आए। आफ्नै नाम काढेर मध्यरातमा अपरिचित मान्छे आएपछि सुतिसकेका श्यामबहादुर उठे।
ती दुई रहेछन्, नेपाली सेनाको देवीदत्त गणका मेजर मनमोहन वाइबा र प्रितम राणा। आफूसँगै हिँड्न भनेपछि श्यामबहादुर मध्यरातमै उनीहरुको पछि लागेर गए। लीलादेवी पनि श्रीमान्‌कै साथ जान खोजिन्। तर, उनीहरुले रोके।
२०५९ भदौको मध्यरात घरबाट लगिएका श्यामबहादुर १६ वर्ष बितिसक्दा पनि घर फिरेका छैनन्। सेनाका मान्छेले श्रीमान् लग्नेबित्तिकै त्यो खबर सुनाउन उनी नजिकैको माइती गाउँ पुगेकी थिइन्। त्यहाँबाट पनि सेनाले अरु ६ जनालाई लगेको रहेछ। माइती पक्षले अरुलाई पनि लगेको भन्दै उनलाई सान्त्वना दिन खोजे।
उनले धेरैतिर श्रीमान्‌को खोजबिन गरिन्। सेनाको ब्यारेक गएर सोध्दा उनलाई भनियो, ‘तिम्रा मान्छे यहाँ छैनन्, खोज्न नआउनू।’
केही दिनपछि नजिकैको गाउँमा ६ जनाको हत्या भएको खबर फैलियो। उनले श्रीमान्‌ पनि त्यही घानमा परेको आशंका गरिन् र त्यहाँ पुगिन्। 'लास लिन गए गोली हान्ने धम्की आएपछि म डराएँ,' उनी भन्छिन्, 'संकटकालको बेला थियो, अरु पनि हच्किए। चित्त नबुझेपछि एक मध्यरात एक्लै जान खोजेको थिएँ तर रोकियो।'
घटनाको एक वर्षपछि जिल्लाका केही पत्रकार र मानवअधिकारकर्मीका साथ लागेर घटनास्थल पुगिन्। तर, त्यहाँ कपडाका टुक्राबाहेक केही पनि पाइनन्।
हत्या गरिएका भनिएका ६ जना को थिए? त्यसमा उनका श्रीमान् थिए वा थिएनन्? लीलादेवीलाई केही अत्तोपत्तो लागेन।
श्रीमान् गाडी चलाउँथे। धेरै वर्ष अरुको गाडी चलाएपछि आफ्नै चलाउन थालेको केही वर्ष मात्रै भएको थियो।
'सेनाले लिएर बेपत्ता नै पार्नु पर्ने के दोष थियो उनको?' माओवादीको आरोपमा लगिएको भन्दै उनले सुनाइन्, ‘सेनाका मान्छेले कहिले चोरीसिकारीमा, कहिले दोहोरो भिडन्तमा मरेको भने।’
त्यसपछि कहिल्यै फर्किएनन् पदमप्रसाद
सामान्य किसान थिए, पदमप्रसाद अधिकारी। घरमै बसिरहेका बेला २१ फागुन २०५८ मा नचिनेका मान्छे आएर उनलाई लिएर गए। १७ वर्ष भयो सीतादेवीले श्रीमान् आउने आशामा कुरेर बसेको। तर, पदमप्रसाद अहिलेसम्म फर्किएका छैनन्।
को थिए, पदमप्रसादलाई लिएर जाने?
मान्छे नचिने पनि ती राज्यकै मान्छे थिए भन्ने लाग्छ, सीतादेवीलाई। ‘माओवादीका मान्छे आएर जबरजस्ती खाना खुवाउन भन्थे,’ उनको अड्कल छ, ‘एक-दुईपटक खान पकाएर उनीहरुलाई खुवाएकी थिएँ, त्यही निहुँमा माओवादी भनेर उहाँलाई लगेको जस्तो लाग्छ।’
१८ वर्षदेखि बेपत्ता कृष्णप्रसाद
नेपाली सेनामा थिए, कृष्णप्रसाद आचार्य। सशस्त्र द्वन्द्व बढ्दै गएपछि उनी सेनाको जागिर छाडेर घरमै बस्न थालेका थिए। पाँच-छ वर्ष सेनामा काम गरेका उनले जागिर छाडेको तीन वर्ष भएको थियो। अपरिचत मान्छे आएर जागिर लगाइदिने भन्दै कृष्णप्रसादलाई लगेर गएका थिए। ‘पहिले सेनामा काम गरेको मान्छे, राम्रो जागिर पाइन्छ भन्दै लिएर गए,’ मोहनकला सम्झन्छिन्, ‘माओवादीले लिएर गएको भन्ने हल्ला चल्यो तर कसले लगेर गयो भन्ने ठ्याक्कै थाहा छैन।’
भूपु सेना भएकाले कृष्णप्रसादलाई माओवादीले आफ्नो सेनामा लगेर गएको गाउँलेको आशंका छ। मोहनकलालाई पनि त्यस्तै लाग्छ। तर, मान्छे किटान गर्न नसक्दा उनलाई अप्ठ्यारो भएको छ। ‘माओवादीलाई सोध्दा प्रमाण के छ भन्छन्?’ उनी सुनाउँछिन्, ‘मैले के प्रमाण ल्याएर दिने? मेरो श्रीमान् मसँग नहुनु प्रमाण होइन र?’
१६ पुस २०५७ को घटना थियो त्यो। कृष्णप्रसाद बेपत्ता भएपछि मोहनकलाको परिवारै छिन्नभिन्न भयो। छोरा बेत्ता भएका वेदनाले कृष्णकी आमा बितिन्। उनका बुवाले अर्की श्रीमती ल्याए। कान्छी श्रीमतीलाई सम्पत्ति दिनुपर्ने दबाब परेपछि कृष्णका बुवा घर छाडेर प्युठान, स्वर्गद्वारीको आश्रममा लामो समय बसे।
परिवारमा सुख, शान्ति नभएपछि मोहनकला पनि पाँच-छ बर्ष माइतीमै गएर बसिन्।
आफ्नो श्रीमान्‌को लाससम्म पनि नपाएका उनीहरुमध्ये सीतादेवी र मोहनकलाले द्वन्द्वपीडितले पाउनुपर्ने राहातसम्म पाएका छैनन्। लीलादेवीका हकमा भने जसोतसो राहतस्वरुप २०६९ मा १० लाख पाएकी थिइन्। तर, त्यसले आफ्नो परिवार धान्न नै धौधौ हुने लीलादेवी बताउँछिन्।
उनका दुई छोरा र दुई छोरी छन्। ‘श्रीमान्‌को खोजीमा लाग्दा मैले दुई कट्ठा जमिन बेच्नुपर्‍यो,’ उनको गुनासो छ, ‘छोराछोरी छन्, उनीहरुलाई पढाउनुपर्यो। लालनपालन गर्नुपर्यो। आयआर्जनको स्रोत नभएपछि कसरी गुजारा चलाउने?’
राहतका रुपमा सीतादेवी र मोहनकलाले भने एक रुपैयाँ पनि पाएका छैनन्। उनीहरुले राहत पाइन्छ भन्नेसम्म थाहा पाएनन् र त्यसको प्रक्रियामा जाने भेउ पाएनन्।
उनले २०७३ मा मात्रै स्थानीय शान्ति समितिमा श्रीमान् बेपत्ता पारिएको उजुरी दिइन्। द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएकाको छानबिन गर्न बनेको आयोगले बल्ल उनका श्रीमान् बेपत्ताको सूचीमा दर्ता भएका छन्।
सीतादेवीले २०७१ मा मात्रै राहत पाइनेबारे थाहा पाइन। ‘राहतका नाममा अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि पाइएको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘राहत पाइन्छ भन्ने पछि मात्रै थाहा भयो। कसैले भनेनन् पनि।’ उनका तीन छोरी छन्। श्रीमान् पदमप्रसाद बेपत्ता पारिएपछि छोरीको पालनपोषणमा निकै अप्ठ्यारो परेको उनको अनुभव छ।
उता मोहनकलाको अवस्था पनि त्यस्तै छ। धेरै समय घरबाहिरै रहेकी उनलाई श्रीमान्‌को खोजी कसरी गर्ने भन्ने थाहासम्म पाइनन् र सिकाउने पनि कोही भएन। ‘त्यतिबेला केही पनि थाहा भएन,’ उनले सुनाइन, ‘उजुरी दिनलाई मसँग खासै डकुमेन्ट पनि थिएनन्। बुवाले नै उहाँको नागरिकता लगायतका सबै काजपत्र लिएर जानुभएको थियो।’उनले २०७३ मा मात्रै स्थानीय शान्ति समितिमा श्रीमान् बेपत्ता पारिएको उजुरी दिइन्। द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएकाको छानबिन गर्न बनेको आयोगले बल्ल उनका श्रीमान् बेपत्ताको सूचीमा दर्ता भएका छन्।
स्थानीय शान्ति समितिमा दिएका कागजात राहतका लागि पर्याप्त नभएपछि उनीहरु अहिले बाँकी कागजात बुझाउन काठमाडौं आएका हुन्। ‘राहतका लागि गृह मन्त्रालयमा गाउँपालिकाको सिफारिस लगाएका डकुमेन्ट बुझाएका छौं,’ सीतादेवीले भनिन्, ‘डकुमेन्ट राख्नुभएको छ। राहात दिने–नदिने अझै थाहा भएन।’
राहत लिने प्रक्रियाबारे धेरै नजानेका उनीहरुलाई लीलादेवीले सहयोग गरिरहेकी छिन्।
‘सरकारले नै पालोस् हामीलाई’
लीलादेवीका श्रीमान्‌लाई सकारले बेपत्ताको सूचीमा राखेकै चार वर्ष भइसक्यो। तर, उनको खोजी गर्ने कुरामा भने केही प्रगति भएको छैन। बेत्तपा छानबिन आयोगले चितवन गएर केही सोधपुछ गर्नेबाहेक अहिलेसम्म काम नगरेको उनको भनाइ छ। सीतादेवी र मोहनकलाको घरमा पनि आयोगका कर्मचारी गएर उनीहरुसँग सोधपुछ गर्नेबाहेक थप प्रक्रिया चालेका छैनन्।
राज्यले आफूहरुको जिम्मा लिनुपर्ने उनको माग छ। उनको भनाइ छ, ‘हाम्रो जिम्मा सरकारले लेओस्, सरकारले नै पालनपोषण गरोस्।’
एकातिर श्रीमान् बेपत्ता पारिएको समय बढ्दै जानु, अर्कोतिर राजनीतिक दल, सरकार र छानबिन गर्न बनेका आयोगले काम नगरेपछि न्याय नपाइने हो कि भन्ने भयले उनीहरुलाई सताइरहेको छ। राज्यप्रतिको भरोसा घट्दै गए पनि दोषीले सजाय पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा उनीहरु अहिले पनि अडिग छन्। ‘उहाँ (श्रीमान्) लाई लिएर जाने मान्छेलाई कारबाही हुनुपर्छ,’ लीलादेवीको माग छ, ‘केही दिन भए पनि थुन्नुपर्छ। त्यति मात्रै भए पनि मन सन्तोष हुन्थ्यो।’
सीतादेवी दोषीलाई एक घन्टा भए पनि थुनाए मात्र आफ्नो मनले शान्ति पाउने बताउँछिन्। ‘उहाँलाई कसले लगेर गयो?' अरुलाई दिएको राहत आफूहरुले पनि पाउनुपर्ने माग गर्दै उनी न्याय नपाएसम्म चुप लागेर नबस्ने अठोट व्यक्त गर्छिन्, ‘न्याय पाइन्छ होला भन्ने लाग्दैन। तर, नपाएसम्म चुप लागेर बस्दैनौं।’
मोहनकला पनि आफ्ना श्रीमान्‌लाई बेपत्ताको सूचीमा राख्नुपर्ने, राहत दिनुपर्ने र दोषीलाइ कारबाही हुनुपर्ने माग सरकारलाई सुनाउन चाहन्छिन्।
(नोट : यो सामग्री पहिलो पटक २०७५ पुस २८ गते नेपाल लाइभमा प्रकाशन भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवस (अगस्ट ३०)का सन्दर्भमा हामीले यसलाई पुनः प्रकाशन गरेका हौं।)
नेकपा विवाद समाधानमा निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध ५ विकल्प सर्वोच्चको फैसलाबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई निरुपण गर्न आयोगसँग केही सिमित विकल्पहरु देखिन्छन्। तर, आयोगले लिने निर्णयमाथि कुनै पक्ष फे... मंगलबार, फागुन २५, २०७७
एकता भएको ३३ महिनामा यसरी ब्युँतिए एमाले र माओवादी तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणबाट बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) २ वर्ष ९ महिनापछि फेरि एमाले र माओवादी केन्द्र... मंगलबार, फागुन २५, २०७७
माओवादी केन्द्रको बैठक सुरु, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णय हुने नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक पेरिसडाँडामा सुरु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि माओवादी केन्द्रको पहिलो स्थायी कमिटी ब... मंगलबार, फागुन २५, २०७७
‘तिमीसँगै हुने मन छ’ मा नाजिर अनुबन्धित मंगलबार, फागुन २५, २०७७